Sida loo sameeyo Manifold waxa aan ku sameeyo ArcGIS - Geofumadas
Sida loo sameeyo Manifold waxa aan ku sameeyo ArcGIS
Oktoobar, 2007 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
ArcGIS ee ESRI Waa aaladda ugu caansan Nidaamyada Macluumaadka Juquraafiga (GIS), ka dib markii qaabkiisii ​​hore ee ArcView 3x hore loo isticmaali jiray 1990-meeyadii. Manifold, sidii aan markii hore ugu yearnay «A $ 245 qalabka GIS»Waa aalad cusub, oo ka yar qaab dhismeedka si cadaalad ah u duwan, si kastaba ha noqotee isticmaalku waa qalab leh cabbirro isku mid ah.
1988 USGS waxay dhistay dukumenti la yiraahdo «Habka loo doorto Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed«, Kaas oo daboolay mawduuca la xiriira xulashada nidaamyada, wixii ka baxsan aaladda kumbuyuutarka, ee a liiska hubinta waxa ka mid ah GIS waa in lagu daraa ... digniin, in 1988 waxaan wali isticmaalnaa mashiinada 386 leh daaqadaha 3.0 iyo kuwo badan oo 286 ah oo aad u doorbiday.
Qeybaha waxaa loo kala soocey:
Abuurista macluumaadka kaydka
Maareynta xogta iyo falanqaynta
Kala-bixinta iyo bixinta xogta.
Dukumintiga ayaa noqday mid loo baahan yahay in loo akhriyo kuwa ku lugta leh dunida geospatial, liiskan waxaa loo isticmaalay xulista aaladaha kumbuyuutarka iyo qandaraasyada horumarinta ... waxa xilliyadaas dhaca. In kasta oo dukumintiga uu ku dhow yahay 20 sano, haddana inbadan oo ka mid ah howlaha la taxay waa ansax oo waxay matalaan astaamaha aasaasiga ee nidaamyada maanta, iyadoo magacyada qaarkood ay noqdeen kuwo si xad dhaaf ah ugu sii batay bartayada. geeks.
Iyada oo ku saleysan dukumintigan, Arthur J. Lembo, Jr ayaa u diyaargaroobey tijaabada ardayda Mabaadiida Xeeladeed iyo Qiyaasaha Jaamacadda Cornell. Natiijadu waxay ahayd dukumenti la yiraahdo:
Sidee baan ku sameeyaa Manifoldka waxa aan ku sameeyo ArcGIS
Iyada oo leh bogagga 130, nuxurka habraaca tallaabada-tallaabada ah ee lagu sameeyo shaqada ugu badan ee labada meelood ayaa kobcinaya, iyada oo aan la adeegsan codsiyo dheeraad ah, taasi waa, «ka soo bax sanduuqa«. In kasta oo isbarbardhiggu uu ka mid yahay noocyada 8.3 ee ArcGIS iyo 6.0 ee Manifold caqligu waa ansax. Tarjumida mowduuca maahan waxa booska uu soo jeedinayo, runtii waa dokumenti dhexdhexaad ah oo loogu talagalay in lagu baro dadka isticmaala labada aaladaha, sida loo sameeyo labada nidaamba.
Tixraac wanaagsan oo loogu talagalay dadka isticmaala iyo naqshadeeyayaasha iyo horumariyeyaasha ee adduunkan waalan iyo qiiqa.
Waxaad akhrin kartaa nuxurka qoraalka Halkan, kana soo qaad pdf Halkan iyo sheeko xamaasad ah, halkaas ayaad iigu sheegeysaa.
ArcView ESRI GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Manifold Systems, qalab $ 245 GIS
Post Next orthophotos Sida georeferenced ee Google EarthNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Sida loo sameeyo Manifold waxa aan ku sameeyo ArcGIS"
Kikehulk isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar, 2007 at
Waxaan isticmaalaa Mapinfo, ArcMap iyo hadda Manifold; mar walbana ma joojiyo inaan la yaabay waxa la samayn karo barnaamijkan cusub ee dhaqaale sida Manifold, iyada oo aan shaki ku jirin buugan wuxuu furay adduun fursado cusub; Waxaan kuu soo dirayaa salaada Peru.
Dukumiintiga muhiimka ah, ee ugu fiican!